I-WOWOW Isiphathi Sekhishi Elisodwa Esiphethe Ukukhipha Isifutho
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Khipha ompompi basekhishini / WOWOW Isiphatho Esodwa Sokukhipha Isipreyi Sekhishi
I-WOWOW Isipikili Sekhishi Le-single-Handle Donsa Shutheka
Ukuze kube lula, isikebhe ekhishini kufanele sikhethwe ngaphezulu, futhi ukuphuma kwamanzi kufanele kube yinde. Kungcono ukunweba ngenhla kokukhipha, futhi akumele kufafaze amanzi. Uma kunamapayipi amanzi ashisayo ekhishini, lolu hlobo lwesikhiphi kufanele futhi lube kabili. Ukuze uhlangabezane nezidingo ezahlukahlukene zokusebenzisa, donsa phansi isikebhe esimnyama ekhishini ungaguqulwa u-360 ° uwonke.
Khipha isikebhe ekhishini
Khipha imishini yasekhishini ngokumangalisayo ayijwayelekile. Lezi zinhlobo zekhishi elisekhishini mhlawumbe yizicupho ezincane zasekhishini ongazithola emakethe. Futhi nokho bakunikeza uhla olukhulu lwezinto ezisebenzayo. Isici esiyisisekelo sokudonsa isikulufu sokudla ekhishini yi-hose ende yamanzi lapho ungafinyelela khona ekhoneni ngalinye lekhishi lakho echibini nxazonke. Ikakhulu uma une-ekhishini ephindwe kabili, lokhu kukhipha isikulufu sokudla ekhishini se-WOWOW ukukunikeza konke ukufinyelela okudingayo. Ngakolunye uhlangothi isikebhe sokukhishwa ekhishini ngakolunye uhlangothi sine-spout emfushane. Inhloko yesifutho noma kunjalo inezindlu ku-spout, kepha ngeke ukubone lokhu. Uzozuza nje ngehipi elikhulu lamanzi.
Enye inzuzo enkulu yokudonsa ekhishini isikebhe sokukhipha ekhishini ukuklama okuyingxenye emi-3 okuhlala isikhathi eside. Kulula ukuvula isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ekhishini ngama-degrees angama-360. Isikhiphi sokukhipha ekhishini sesivele sisezingeni elincane kakhulu ukuze sinikeze ukufinyelela okuhle kuwe okusinki yekhishi. Le faucet ekhishini encane kakhulu ngeke yakha noma yisiphi isithiyo. Kepha njengoba ukwazi ukuguqula lokhu kukhipha isikulufu sefenisha ekhishini ngama-degree angama-360, futhi uzokwazi ukufinyelela ngokuphelele ekhishini lakho lokucwila ngaso sonke isikhathi, ngaphandle kokuvinjwa. Lo mshini wenziwe ngezinto eziqinile, ngakho-ke lokhu kuzoba njalo futhi.
I-oyili yethusi ehlikihlwe i-oyili ikhipha isikebhe ekhishini
Ukuqedwa okumnyama kwalokhu kukhipha isikulufu sokudla ekhishini kuyinto ekhethekile impela, futhi ngeke uhlangane nalolu hlobo lokuqeda okuningi kunoma yikuphi ukukhishwa kwekhishi. Ungenza ukwakheka kwekhishi lakho kuhlukane ngalolu hlobo lombala wepulangwe ekhishini. I-WOWOW's ukukhipha isikulufu ekhishini isiqediwe nge-bronze yethusi egcotshwe uwoyela. Ngale ndlela ibukeka kakhulu njengocingo lwe-retro. Lokho kunikeza isitayela sakho sasekhishini nakanjani ukuthinta okukhethekile. Kanye nokuqedwa kwe-quartz emnyama, kunikeza ubuhle obukhulu ekhishini lakho. Futhi-ke ihlala isikhathi eside, yingakho isikebhe sakho sasekhishini sivikelekile isikhathi eside.
Ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo ngephethenisi lakho lasekhishini, kufanele ucabange ngokujulile ngaphambi kokwenza noma yisiphi isinqumo. Ucwaningo selukhombisile ukuthi isikebhe ekhishini singenye yezindawo ezibalulekile zokugxila kunoma iyiphi ikhishi. Ngakho-ke, ukunakwa kwabantu kudonswa ngokuzenzakalela kufenishi ekhishini lakho. Lokho kukutshela ukuthi ukhethe ikhephu lakho lasekhishini ngobuhlakani. Kubukeka sengathi ungenza umthelela omuhle ngephepheni lakho lasekhishini. Ngenxa yalokho, lokho kusho ngendlela enhle, kodwa futhi ngendlela embi. Ngokuqinisekile unganikeza ikhishi lakho ukuphakama okukhulu ngefenisha ekhishini lakho. Ngakolunye uhlangothi, lapho uthatha isinqumo esingalungile, unganciphisa nokukhombisa ikhishi lakho. Ku-WOWOW sithanda ukukunikeza izifiki zasekhishini ezinhle kakhulu ekhishini lakho elikhanyayo.
Khipha intengo yethebula kahle ekhishini
Njengoba usebenzisa imali eningi ekhishini lakho lokuklama, ufuna konke kube okuphelele. Ungathanda ukwakha ikhishi lakho lamaphupho, ikhishi okuhlale uphupha ngalo. Ukuze wenze ikhishi lakho lamaphupho, kubalulekile ukufaka izitshana zakho zasekhishini ekwakhiweni kwekhishini lakho lokuqala. Njengoba kushiwo, isikebhe ekhishini siyingxenye ebalulekile yomklamo wakho wasekhishini, ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi kufakwe kusukela ekuqaleni. Kodwa-ke, abaklami abaningi basekhishini abazifaki, bese beshiya le nto ikhuphukela kuwe ukuyothenga ngokwahlukile. Kubalulekile-ke nokho ukuthi ukhethe kahle isikebhe sakho ekhishini ukuze wakhe ingxenye ebaluleke kakhulu ekhishini lakho.
Ngakolunye uhlangothi, iqiniso lokuthi isikebhe esisekhishini alufakwa ekwakhiweni kwekhishi lakho kukulethela inzuzo: ungakhetha inani elingcono kakhulu lemali ongalithola emakethe. Awuthembeki kumthengisi wakho wasekhishini ozophinde futhi akujabulele ukuphinda kabili noma kathathu inani lentengo yakho yokudonsa ekhishini. Lapho ukhetha ithiphu ekhishini ngokwakho, ungazikhethela kahle isikulufu sokudla ekhishini olifunayo. Ku-WOWOW ukhokha inani elifanelekile lokukhipha isikebhe sakho ekhishini, ngakho-ke inketho engcono kakhulu kuwe nesikhwama sakho.
Ukugeleza kwamanzi kukhipha isikulufu esisekhishini
Lokhu kukhipha isikulufu sokudla ekhishini se-WOWOW sibonisa ukugeleza kwamanzi okubandakanya izindlela ezimbili zamanzi: ukugeleza kanye nesifutho. Ngalezi zindlela zokugeleza kwamanzi ungageza, ugcwalise, noma ucoce izinto ekhishini lakho. Njengoba isikebhe sokukhishwa ekhishini sigqokwa nge-aerator entsha ye-ABS, iqinisekisa umfudlana wamanzi oshelelayo futhi oqinile. Ngaphandle kwalokho, lesi sici esithile sibuye sikusindise ukusetshenziswa kwamanzi kakhulu. Le aerator ikusindisa ngo-50% wokusebenzisa amanzi oyoqaphela nakanjani kumthethosivivinywa wakho wamanzi. I-aerator ingasuswa nje, ukuyicoca noma ukuyifaka esikhundleni sayo.
Ngaphezu kwalokho, le faucet ekhishini esezingeni eliphakeme yenziwa ngezixhumi eziqinile zethusi ngenhlanganisela yensimbi engenacala, nethambo lamanzi lensimbi engenasici. Ngenxa yalezi zinto ezisezingeni eliphakeme, isikebhe sokukhipha ekhishini singamelana nokugqwala nokugqwala. I-cartridge ye-ceramic ayinashayela ukukunikeza induduzo enkulu usebenzisa le isikebhe ekhishini. Njengoba i-hose yamanzi nayo yenziwa ngensimbi engenacala, inikezela ngesakhiwo sokulwa nokuqhuma futhi ngeke igqoke futhi idabuke. Leli hose lamanzi liyohlala libuyela kalula esimweni salo sokuqala. Kungamelana nokucindezela kwamanzi okuphezulu ngaphandle kwenkinga.
Iwaranti ikhipha isikebhe ekhishini
Le faucet ekhishini enhle iyasebenza ukusetshenziswa kwezentengiso. Ngenxa yokuqedwa kwayo okuyi-quartz emnyama ehlukile, ingamelana kalula nokugqwala nokuqala. Ngakho-ke inikeza ikhwalithi ehlala njalo. Ngenxa yalokho, i-WOWOW nayo ikwazi ukukunikeza isikhathi seminyaka engu-5 iwaranti. Njengoba iningi labaphakeli bepheki ekhishini linikezela nje isikhathi sewaranti yeminyaka eyi-1, iWOWOW nakanjani yenza umehluko lapha. I-Wowow idlula yonke imigomo yezimboni, nokuthi uqaphela kuzo zonke izici zalokhu kukhipha isikulufu sokudla ekhishini. Isikhiphi sakho sokukhipha ekhishini sine-insured futhi nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Ngale ndlela awugijimeli ubungozi ngaleli faucet ekhishini enhle. Izinzuzo zesikhiphi ekhishini lokukhipha ngamafuphi: • Unika into esekhishini kunoma iyiphi ikhishi
• Ukuphela kokuhlaba umxhwele kwe-brashi emnyama ye-retro ehlaba umxhwele
• Idizayini encane
• I-Pragmatic khipha i-hose yamanzi
• Kwenziwe ngethusi eliphakeme kakhulu nezinto zensimbi ezingenasici
SKU: 2310501Q Categories: Ikhishi Faucets, Khipha ompompi basekhishini Tags: Ikhishi Sink Faucet, I-single Handle Donsa, Ikhishi le-Sprayer
16.8 x 11.4 x amasentimitha angu-3.5
Umsebenzi we-Steam & Spray
Ipuleti elilodwa elijwayelekile